Ejypta: Mampiasa Twitter Hanampiana Fokontany Mahantra ao Kairo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Septambra 2011 4:32 GMT
Vakio amin'ny teny Français, عربي, македонски, Español, 繁體中文, 简体中文, Italiano, Nederlands, русский, Svenska, Shqip, srpski, Deutsch, English
Rehefa hita ny herin'ny valantserasera tamin'ny revolisiona Ejipsiana, dia nanapa-kevitra hiara-hiasa amin'ny fikambanana manao asa soa ao an-toerana ilay bilaogera Ejipsiana sady mpisiokantserasera Mahmoud Salem (@SandMonkey), mba hanampy azy ireo amin'ny fanangonam-bola amin'ny alalan'ny fampiasana ny herin'ny Twitter ka hanangana fotodrafitrasa amina faritra mahantra ao Kairo.
Ezbet Khairalla, no iray amin'ny faribohitry ny mahantra midadasika indrindra ao Ejipta, ahitana vahoaka manakaiky ny 650.000. Faribohitra izay manana velarantany 12 km toradroa eo ho eo ary miorina amin'ny lembalembam-bato amin'ny ilany atsimo ao Kairo. Na dia ao anatin'ny fivondronan'i Kairo aza i Ezbet Khairalla dia maro ny foto-drafitrasa tsy hita ao; tsy ny lakan-drano fanariana rano maloto sy ny fanariam-pako ihany, fa eo ihany koa ny tsy fahatomombanan'ny fampianarana, ny faharatsian'ny tobim-pahasalamana ary ny fikarakarana ara-tsosialy. Araka izany dia heverina ho toy ny taninketsen'ny fandikan-dalàna sy ny rotaka ara-tsosialy ity faritra be mponina ity.
Mpi-tweet nitsidika sekolin'ankizy tao Ezbet Khairallah, Kairo. Sary avy amin'ny @pakinamamer (July 30, 2011)
Sarina làlana ao EZbet Khairallah nalain'i @pakinamamer tamin'ny Yfrog
Mba hanampiana amin'ny fanatsarana ny fari-piainana ao Ezbet Khairalla, Khair Wa Baraka (Peace and Plenty) na ( Filaminana sy Fahabetsahana), fikambanana niorina tamin'ny taona 2004, no nanomboka niasa amina tetikasa momba ny fanabeazana, ny fahasalamana ary ny tontolo iainana, indrindra taorian'ny fanadihadihana nataon'izy ireo izay nampiseho fa ny olana lehibe indrindra ao amin'io faritra io dia ny fitantanana ny fakofako matevina sy mitsiranoka (rano maloto). Nanolotra fiara mpivezivezy momba ny fitsaboana sy ivom-pampianarana fitaratra ny fikambanana.
Noho ny fanohanan'ny vahoaka ao amin'ny Twitter, nahangona vola 2 tapitrisa Livre Ejipsiana (maherin'ny 330,000 dolara US) ny fikambanana “Peace and Plenty”, ao ihany koa ny fanentanana natao tao amin'ny faritra. Nantsoin'i Salem hoe “tweetback” (@tweetbackevent) ny fandraisana antanana nataony, nampiasaina tamin'izany ny renivola sosialy avy amina mpisionkatserasera manintona izay nahavory mpanaraka manodidina ny 250 000 eo eo. Samy nahazo vola avy amin'ny malalatanana ry zareo ka ny takalony dia fanaovana dokambarotra ny orinasa nanome amin'ny mpanaraka azy. Nanao izay hampalaza ity fandraisana an-tanana ity koa ry zareo ary manazava amin'ny olona ny fomba fandraisany anjara.
M-Tweet nandrita ny hetsika Tweetback. Sary avy amin'i Rania Helmy, anisan'ny mpikarakara.
Ny 26 Jolay 2011, nikarakara hetsika fitadiavam-bola ny “Peace and Plenty” izay notontosaina tao amin'ny hotely Marriott ao Kairo, izay nanambaran'izy ireo fa vola 1,349,000 Livre Ejypsiana ($226,600) no efa voaangona.
Ireo mpisiokantserasera izay nanatrika ny hetsika ihany koa dia ni-tweet momba ireo malala-tanana sy ny sandan'ny vola nomeny, na orinasa mpanao zava-pisotro, na mpandraharaha ny fifandraisan-davitra, na koa mety malala-tanana mandà hilaza ny mombamomba azy. Nametraka nomerao finday manokana ho an'ny vahoaka ihany koa izy ireo mba ahazoana 3 Livre Ejypsiana ($0.50), ary mbola nampiasaina ihany koa ny Twitter entina nanaparitaka ny vaovao.
Manantena ireo mpikarakara ny Tweetback fa vao santatra ambavarano iny araka ny nosoratan'i Salem tao amin'ny bilaoginy, “Mbola ho avy ny manetsaben'ny fandraisana antanana raha notohananao ny santatra ambavarano, izay noho ny anton-javatra maro sy maha-zavabaovao azy, dia miandry fatratra ny fanohananao.” Faritan'ny Peace and Plenty ho santionan'ny “faribohitra tsy voarafitra” mila fampandrosoana i Ezbet Khairalla. Angamba mety ho avy koa ny fandraisana andraikitra maromaro hafa hanampiana faribohitra tsy voarafitra hafa ihany koa.